Xai Yak Techonology: How Much Electricity Does Your Computer Use?
တစ်နေ့တစ်နေ့ မိမိ ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ သုံးစွဲနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခကို တိတိကျကျမသိချင်ဘူးလား ?
Window7OS ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Laptop နဲ့ Desktop ကွန်ပျူတာတွေကို တစ်နေ့လုံး သုံးစွဲနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခကို တိတိကျကျသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လျင်မြန်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။
အဆင့်(၁)။ ။ မိမိ ရဲ့ monitor, CPU, graphic card နဲ့ တခြားသောကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ စုစုပေါင်း ပါဝါစားသုံးမှု( ကီလိုဝပ်) ကို ပထမဦးဆုံး တွက်ချက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုတွက်ချက်ရမှာလဲလို့ ပူပန်မှုဖြစ်မသွားပါနဲ့။ ဒီတွက်ချက်မှုကို သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ Miscrosoft က ဖရီးဆော့ဝဲလ်တွေဖြစ်တဲ့ Joulemeter က Screen တောက်ပမှု နဲ့ Microprocessor အစရှိသည်တို့ကိုအခြေခံပြီးတော့ မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ ပါဝါစားသုံးမှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်(၂)။ ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့
မိမိမြို့ နယ်မှာကောက်ခံနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခကို သိနေရပါလိမ့်မယ်။ (ဒီမှာတော့ ယူနစ်လိုက်ကောက်ခံပြီးတော့ တချို့နေရာတွေမှာ ကီလိုဝပ်နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ စစ်တွေမှာတော့ တစ်ယူနစ်ကို (၄၄၀) နှုန်းကောက်ခံပါတယ်။ :(
လျှပ်စစ်မီတာ တစ်ယူနစ်ခကို မသိခဲ့လို့ရှိရင် အရင်လက လျှပ်စစ်သုံးစွဲခ ပြေစာကနေ သိနိုင်ပြီးတော့ လျှပ်စစ်ဓါတ်ပေးနေတဲ့ EPC ကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ (စစ်တွေမှာတော့ ဖိုးသီးချို ကုမ္ပဏီက Computer ထဲမှာ ဘာတွေရှိလားမရှိလား မသိပါဘူး။ ပြေစာမှာတော့တစ်လထက်တစ်လ ဟိုဖိုးဒီဖိုးတွေတိုးတိုးလာပါတယ်။ :P )
အဲဒီ နံပါတ်နှစ်ခုကိုသိရှိပြီဆိုတော့ အဲဒီနှစ်ခုကို မြှောက်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ ခန့်မှန်းခြေလျှပ်စစ်သုံးစွဲခကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခန့်မှန်းခြေလို့ပြောရတာကတော့ ကျွန်မတို့ Modem နဲ့ Router စတာတွေရဲ့ ပါဝါစားသုံးမှုကို လျစ်လျူရှုထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့လက်တွေ.တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ကြပါမယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာမော်နီတာက ပါဝါနှုန်းထား ၅၀ ၀ပ် ရှိတယ်လို့ထားပါ။ ကီလိုဝပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ၀.၀၅ ကီလိုဝပ်ပါ။ သုံးစွဲနှုန်းကြာချိန်က (၈)နာရီဆိုလို့ရှိရင် တစ်ယူနစ်ကို (၄၄၀) နှုန်:နဲ့ဆို ၀.၀၅ x ၈ x ၄၄၀ ဆိုတော့ (၁၇၆) ကျပ် ကျရှိမှာပါ။
အဲဒါကမော်နီတာတစ်ခုတည်းတန်ဖိုးပါ။ ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ပါဝါစားသုံးမှုကိုလည်း အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Joulemeter software သုံးပြီး တွက်ချက်နိုင်ပြီးတော့ လျှပ်စစ်မီတာတစ်ယူနစ်ခနဲ့ မြှောက်လိုက်ရင် ပျှမ်းမျှကွန်ပျူတာတစ်လုံးလည်ပတ်နှုန်းကို သိရှိနိုင်မှာပါ။
PS: Joulemeter Application က Window7တင်ထားသည့် ကွန်ပျူတာရဲ့ CPU,hard disk အရွယ်အစားနဲ့အမျိုးအစား၊ Memory အရွယ်အစားနဲ့အမျိုးအစား နှင့် စက်ထဲမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ Application တွေ၊ Internet service provider နှင့် IP address တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ upload လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Joulemeter software ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 20:30